ओली-प्रचण्ड आ-आफ्नो रणनीति बुन्दै, एकता अनिश्चित् ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com
ओली-प्रचण्ड आ-आफ्नो रणनीति बुन्दै, एकता अनिश्चित् !
काठमाडौं, २६ माघ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच सम्बन्ध एक्कासी चिसिएको छ । दुवै अध्यक्ष आ–आफ्नो रणनीतिमा व्यस्त रहेको स्रोतको दाबी छ ।
भेनेजुएला प्रकरणमा जारी वक्तव्यलाई लिएर ओली प्रचण्डसँग रुष्ट बनेका छन् । अहिले त उनीहरुबीच सतहमै एकअर्काविरुद्ध असन्तुष्टि पोखिन थालेको छ । त्यसैले पार्टीभित्र कसरी आफूलाई बलियो बनाउने भन्नेमा दुवै अध्यक्ष यतिवेला रणनीति बनाउन व्यस्त रहेको नेकपानिकट उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
पछिल्लो समय अध्यक्षद्धय एक अर्काबीच आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । भेनेजुएला प्रकरणमा ओलीले प्रचण्डविरुद्ध कडा टिप्पणी दिए । ओलीले आफू नेपालमा भएको भए त्यस्तो वक्तव्य नै नआउने दाबीसमेत गरे । तर, प्रचण्डले त्यसको भोलिपल्टै ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै पार्टीले र सरकारले पनि आफ्नै लाईनमा वक्तव्य दिएकोले व्यक्तिले असन्तुष्टि राख्दैमा अब कुनै अर्थ र महत्व नहुने बताए ।
हिजोमात्रै प्रचण्डले माओवादीहरुलाई सिध्याईहालियो भन्ने ठाने त्यो दुर्भाग्य हुने भन्दै ओलीको नाम नलिई उनलाई चेतावनी समेत दिए । त्यसपछि त ओली र प्रचण्डबीच सम्बन्ध बिग्रिएको लख काट्न थालिएको छ । ओली–प्रचण्डको वाकयुद्धका कारण पार्टीको सांगठानिक एकतामा नै ठूलो असर पुग्ने भएको छ ।
बालुवाटर स्रोतका अनुसार हिजोमात्रै ओली र प्रचण्डबीच फोनवार्ता भएको छ । तर, उनीहरुबीच सौहार्दपूर्ण कुराकानी भने हुन नसकेको स्रोतको दाबी छ । ओलीसँग प्रचण्ड बिच्किएका हुन् वा परिस्थितिले यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको हो भन्नेमा नेकपाकै प्रभावशाली नेताहरु अन्यौलमा छन् । दुई पार्टी एकताको लागि अथक मेहनत गर्ने नेताहरु नै ओली र प्रचण्ड एक अर्काविरुद्ध जेहाद छेड्न थालेकोमा आश्चर्यचकित छन् ।
यता प्रचण्डले पार्टीका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग आफ्नो हिमचिम बढाएका छन् । उनीहरुबीच पछिल्लो समय लगातार भेटवार्ता भैरहेका छन् । नेकपाकै नेताहरुको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने प्रचण्डले माधव नेपालकै सहमतिमा भेनेजुएला प्रकरणमा विज्ञप्ती निकालेका हुन् । कतै, प्रचण्डले नेता नेपालको साथमा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी कस्न थालेका त होईनन भन्ने चिन्ता ओली गठबन्धनलाई पर्न थालेको छ ।
प्रचण्ड र नेता नेपाललाई ओलीसँग रुष्ट बनेका नेता वामदेव गौतमको पनि गतिलो साथ रहेको स्रोतको दाबी छ । सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्नै लागेको बेला प्रचण्डले ओलीविरुद्ध यसरी सार्वजनिक रुपमै जेहाद छेड्नुको पछाडि कतै ओलीलाई हटाएर प्रचण्ड आँफै सत्तारोहण गर्ने तयारी त होईन भन्ने पनि अनुमान गर्न थालिएको छ ।